Biography | သင္ကာဘုန္းျမင့္-Thinker Bhone Myint
July 21, 2017 · 4:08 pm
ခ်က္စတာ ဘင္နင္တန္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ ေနာက္ကြယ္က အိပ္မက္ဆိုးမ်ား
Linkin Park ေရာ့ခ္ဂီတ အဖြဲ႔ရဲ႕ ဦးေဆာင္အဆိုေတာ္ ခ်က္စတာ ဘင္နင္တန္ (Chester Bennington) သူ႔ကိုယ္သူ ဆြဲႀကိဳးခ်ၿပီး အဆံုးစီရင္သြားတဲ့ သတင္းဟာ ကမာၻတလႊား ဂီတသမားေတြနဲ႔ သူ႔ပရိသတ္ေတြ အၾကား တုန္လႈပ္သြားေစခဲ့ပါတယ္။ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔ သူေသဆံုးခ်ိန္မွာ အသက္ ၄၁ ႏွစ္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ Hybrid Theory အယ္လ္ဘမ္နဲ႔ ပထမဆံုး နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ ဘင္နင္တန္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္ေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ျပႆနာေတြနဲ႔ ႐ုန္းကန္ရတာေတြ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ကေလးဘဝ အရြယ္တုန္းက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ခံရမႈ အရိပ္မည္း၊ ေအာင္ျမင္မႈမရခင္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ဘဝနဲ႔ လမ္းေပၚမွာ ေနခဲ့ရတဲ့ ဘဝနဲ႔အတူ ေအာင္ျမင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ မူးယစ္ေဆးနဲ႔ အရက္စြဲတဲ့ ဒဏ္ကို တြန္းလွန္ေနခဲ့ရပါတယ္။
၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ Meteora, ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ Minutes to Midnight, ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ A Thousand Suns, ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ Living Things, ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ The Hunting Party နဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ One More Light အေခြေတြ ထြက္ရွိခဲ့ၿပီး Linkin Park ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကို ဆက္တိုက္ ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
Filed under Art, Article, Biography, MCN
Tagged as Art, Article, Biography
July 14, 2017 · 4:18 pm
တ႐ုတ္ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူ လူေရွာက္ဘိုရဲ႕ ဘဝခရီးၾကမ္း
တ႐ုတ္ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူ ႏိုဘယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ လူ ေရွာက္ဘိုဟာ အသည္းကင္ဆာနဲ႔ ကြယ္လြန္သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေရွာက္ဘိုဟာ ကဗ်ာဆရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ၊ စာေပပညာရွင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုတဲ့ စာတမ္းကို ေရးသားခဲ့တဲ့ အတြက္ လူေရွာက္ဘိုကို တ႐ုတ္အစိုးရက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၁ ႏွစ္ အျပစ္ေပးခဲ့ၿပီး ဇနီးျဖစ္သူ ပန္းခ်ီဆရာမ၊ ကဗ်ာဆရာမ၊ ဓာတ္ပံုဆရာမ လူရွား ဟာလည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ခံထားရပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာေတာ့ လူေရွာက္ဘိုဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆု ခ်ီးျမွင့္ခံရပါတယ္။
အသည္းကင္ဆာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေရာက္ေနၿပီဆိုတာ သိရၿပီးတဲ့ေနာက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ တ႐ုတ္အစိုးရက လူေရွာက္ဘိုကို ေထာင္ထဲက ထုတ္ၿပီး ေဆး႐ံု ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ လူေရွာက္ဘို ကင္ဆာေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေရာက္ေနၿပီဆိုတဲ့ သတင္းဟာ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ လူေရွာက္ဘိုရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြကို တုန္လႈပ္ေစခဲ့ပါတယ္။
Filed under Article, Biography, China, Politics
Tagged as Article, Biography, China, Politics
August 13, 2016 · 1:57 pm
Filed under Art, Article, ေကတီေက, Biography, Movie, Uncategorized
Tagged as Art, Article, ေကတီေက, Movie
March 21, 2010 · 7:21 pm
We Need to Know Clearly
ဒီရက်ထဲ ပို့စ်မရေးဖြစ်၊ ဒေါက်တာလွဏ်းဝေ (အလှတရား) က ဘာသာရေးစာအုပ်တွေ ရေးနေသော ဆရာကြီးတစ်ပါး၏ ဘွဲ့ထူးတစ်ခု လာပြပြီး ဝိုင်းရှာပေးပါ ပြောသည်။ ကျနော့် အတွေးများ ၂၀၀၅ သို့ ပြန်ရောက်သွားသည်။
Filed under Biography, Religion
January 23, 2010 · 5:34 pm
ဒေါက်တာလှမြင့် (၁၉၂၀- )
စီးပွားရေးပညာပါမောက္ခ (၁၉၆၆-၁၉၈၅)၊ လန်ဒန်စီးပွားရေးကျောင်း။
လန်ဒန်စီးပွားရေးကျောင်း(L.S.E) မှ မြန်မာလူမျိုး စီးပွားရေးပညာရှင်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ သီအိုရီထုတ်ဖော်သူ။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု (Economic Development) တွင် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေး၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အထူးပြုသော သဘောတရားရေးရာများကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
အဒမ်စမစ် (၁၇၂၃-၁၇၉၀) ဖော်ထုတ်ခဲ့သော Vent for Surplus သီအိုရီကို ဒေါက်တာလှမြင့်က စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့လာရေးတွင် ဆက်လက်တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
Filed under Biography, Economics
December 26, 2009 · 1:04 pm
ဖွံ့ဖြိုးရေးနယ်ပယ်မှ ပဓာန တွေးခေါ်ပညာရှင် ၅၀
ဒီစာအုပ်ကို မာတိကာလောက် စာရင်းတင် ဘာသာပြန်မယ်ဆိုပြီး ကျောင်းက စင်တာမှာ သွားသွားရှာတာ မတွေ့ဘူး။ ဘယ်သူငှားထားတယ်တော့မသိဘူး၊ ကြာပြီ။ အခု ဂူဂယ်စာအုပ်မှာ တွေ့လို့ ဆန္ဒပြည့်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ရေးရင်းနဲ့ ဂူဂယ်စာအုပ်မှာ အကုန် မရနိုင်တာမို့ ရှိသလောက် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ကို ဒေးဗစ် ဆိုင်မွန် (David Simon) က တည်းဖြတ်ပြီး Routledge က ၂၀၀၆ မှာ ထုတ်ဝေတယ်။ Development Studies ကျောင်းသားတွေ ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများရဲ့ အယူအဆတွေကို သင်ရဖူး၊ ဖတ်ဖူးပေမယ့် လုံးဝ မသိတဲ့၊ မကြားဖူးတဲ့ တွေးခေါ်ပညာရှင်တွေလည်း ပါပါတယ်။
၁။ အဒီဘာယို အဒီဒီဂျီ Adebayo Adedeji (1930- )
♣ (BSc, Dip. in PA, MPA, နိုက်ဂျီးရီးယား)
၂။ အနီးလ် အဂရာဝယ်လ် Anil Agarwal (1947-202)
♣ (အိန္ဒိယ။ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၊ ဂျာနယ်လစ်နှင့် ပညာရှင်။ ဆင်ရဲသားတို့ဘက်မှ အမြင်ဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပြဿနာကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်သူ၊ ထိုသို့ ဆန်းစစ်တင်ပြရာ၌လည်း အင်အားကြီးမားသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးအရကို အကြောက်အလန့်မရှိ စိန်ခေါ်ရဲသူ သဘာဝဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေးသမား။)
၃။ အီလ်မာ အယ်လ်ဗာတာ Elmar Altvater (1938- )
♣ (ဂျာမနီ။ ဝေဖန်ဆန်းစစ် နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒဂိုဏ်းကို ကိုယ်စားပြုသူ။ အရင်းရှင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်း၏ အကန့်အသတ်များကို စနစ်တကျနှင့် ပဋိဘာန်သုံး၍ လေ့လာသုံးသပ်သူ။)
၄။ ဆမီယာ အေမင် Samir Amin (1931- )
♣ (အီဂျစ်။ မာ့က်စ် ဖွံ့ဖြိုးရေးသီအိုရီ၊ အရင်းရှင်စနစ်ကို အပြင်းအထန် ဝေဖန်ရေး၊ အစွန်းရောက် နိုင်ငံရေး ဘောဂဗေဒသမား၊နှင့် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကို ချန်ပီယံမြောက်လောက်အောင် အကြောက်အကန် ဆန့်ကျင်သူ အာရပ်တွေးခေါ်ပညာရှင်။)
၅။ အေ. တီ. အရိယာရတ္တနေ A. T. Ariyaratne (1931- )
♣ (သီရိလင်္ကာ။ အရင်းရှင်စနစ်နှင့် ဆိုရှယ်လစ်စနစ် နှစ်ခုစလုံးမှ ကင်းလွတ်မှုဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းကြောင်းသစ်ကို လျှောက်ရန်အားထုတ်သူ။ သီရိလင်္ကာ၏ ဆင်းရဲမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို လုပ်ဆောင်နေသော အကြီးဆုံး NGO ကြီးဖြစ်သည့် ဆာဗိုဒယာ ရှရာမန်ဒန (စရ်ဝုဒယ စရမဒါန – Universal Awaking for the Gift of Labour) အဖွဲ့ကြီး၏ ခေါင်းဆောင်။)
၆။ ဂျဂဒက် ဘဂဝတီ Jagdish Bhagwati
♣ (အိန္ဒိယ။ လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုသည် အရေးကြီးသော ကောင်းမွန်သည့်အင်အားစု တစ်ခုအဖြစ် ယုံကြည်လျက် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံနှစ်ခုလုံး၌ ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းနှင့် သဘောတရားထုတ်ခြင်းတို့ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့သူ။ သူ၏ အိုင်ဒီယာများသည် အန္ဒိယ၌သာမက ပြည်ပနိုင်ငံများ၌ပါ စီးပွားရေးမူဝါဒချမှတ်ရာ၌ လွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့သည်။)
၇။ ပီယာ့စ် ဘလိုင်ကီး Piers Blaikie (1942- )
♣ (ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေးတို့တွင် ရှိနှင့်ပြီး သဘောတရား၊ အများလက်ခံထားသည့် သင်္ကေတ (Symbol) နှင့် အမှတ်အသားပုံရိပ် (Image) တို့ကို ဖောက်ထွက်ပစ်၊ ချေဖျက်ဆန်းစစ်ပစ်သည့် ထင်ရှားသော အိုကွန်နိုကလစ် (Iconoclast) တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။)
Filed under Biography, Development, Research
Tagged as Biography, Development, Research
December 22, 2009 · 2:47 pm
Famous and Influence Sayadaws in History
ထင်ရှားကျော်ကြား သြဇာတိက္ကမ ကြီးမားသော သီလဝန္တ ဂုဏဝန္တ ရှေးဆရာတော်ကြီးများ
သျှင်ဆပဋမထေရ် (၅၁၂ – ၅၆၅ ခန့်)
ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ဖတ္ရန္ / ယူနီကုဒ်နှင့်ဖတ်ရန်
သျှင်ဓမ္မဝိလာသမထေရ် (၅၂၀ ခန့် – ၅၈၀ ခန့်)
သျှင်ဒိသာပါမောက္ခ (၅၅၀ ခန့် – ၆၄၇ ခန့်)
ဆူးတွင်းပစ်ဆရာတော် (၆၇၅ ခန့် – ၇၃၅ ခန့်)
စကြိုသူမြတ် ( ၇၃၅-၈၁၀ ခန့်)
ကန်တော်မင်းကျောင်းဆရာတော် (၈၀၀ ခန့် – ၈၇၀ ခန့်)
သျှင်ခေမာ (၈၁၅ – ၈၆၅ ခန့်)
သျှင်မဟာသီလဝံသ (၈၁၅ – ၈၈၀)
ဝန်တောင်လည်ဘုန်းတော်ကြီး (၈၂၀ ခန့် – ၈၉၀ ခန့်)
သျှင်မဟာရဋ္ဌသာရ (၈၃၀ – ၈၉၂)
သျှင်အဂ္ဂသမာဓိ (၈၄၁ – ၉၁၄)
ရှင်တေဇောသာရ (၈၅၀ ခန့် – ၉၁၀ ခန့်)
သျှင်ဣန္ဒဂုတ္တ (၈၆၀ ခန့် – ၉၂၅ ခန့်)
ပုဂံဆရာတော် (၈၆၀ ခန့် ၀ ၉၂၀ ခန့်)
ဆားထုံဆရာတော် (၉၁၈ – ၉၇၀)
ဝရာဘိသံဃနာထဆရာတော် (၉၃၅ ခန့် – ၁၀၀၀ ခန့်)
တိလောကဂုရုဆရာတော် (၉၄၀ ခန့် – ၁၀၂၀ ခန့်)
တောင်ဖီလာဆရာတော် (၉၄၀ – ၁၀၁၃)
သျှင်ကုမာရကဿပ (၉၅၀ ခန့် – ၁၀၀၀ ခန့်)
သျှင်ကရဝိက (၉၅၀ ခန့် – ၁၀၁၀ ခန့်)
မဟာရတနာကရဆရာတော် (၉၇၀ ခန့် – ၁၀၅၀ ခန့်)
နန်းကျောင်းဆရာတော် (၉၈၆ – ၁၀၆၅)
ရွာကြီး သျှင်ဥက္ကံသမာလာ (၁၀၄၀ ခန့် ၁၁၀၀ ခန့်)
သျှင်စန္ဒမဉ္ဇူသာ (၁၀၄၉ – ၁၀၈၅)
တောင်တွင်းမင်းကျောင်းဆရာတော် (၁၀၆၀ ခန့် – ၁၁၁၀ ခန့်)
အတုလဆရာတော် (၁၀၆၂ – ၁၁၄၈)
ပထမကျော်အောင်စံထားဆရာတော် (၁၀၆၇ – ၁၁၁၅)
(ဤဆရာတော်များစာရင်းနှင့် ထေရုပ္ပတ္တိများကို မြန်မာဝီကီပီဒီယန် ဇေယျတုက ရေးတင်၍ အခြားဝီကီပီဒီယန်များက ကူညီတည်းဖြတ်ပါသည်။ ထပ်မံဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်နေသေးသည်။)
Ref: MOE and my.wikipedia
Tagged as Biography, History, Wikipedia